ကိုယ်ဝန်ဆောင်အပ်ခြင်းနှင့်ပက်သက်၍မကြာခဏတွေ့ရသောမေးခွန်းများ - intouchmedicare
Last updated: 2022-03-25 | 685 ကြည့်ရှုခြင်း |
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်စောင့်ရှောက်မှု့ (Antenatal Care) သို့မဟုတ် ဗိုက်အပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကိုယ်ဝန်စရှိသည့်အချိန်မှစ၍မမွေးဖွားခင်အချိန်အထိ မိခင်နှင့်သန္ဓေသားငယ်၏ကျန်းမာရေးအားစောင့်ရှောက်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ကိုယ်ဝန်စရှိသောအမျိုးသမီးများသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့်တွေ့၍ချက်ချင်းကိုယ်ဝန်အပ်သင့်ပါသည်။ဆရာဝန်မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဥ် ကိုယ်ဝန်သက်တမ်းအရသင့်တော်သောစစ်ဆေးမှု့များပြုလုပ်ခြင်းနှင့် မှန်ကန်သောစောင့်ရှောက်မှု့ပေးနိုင်ရန်မိခင်နှင့်သန္ဓေသားငယ်၏ကျန်းမာရေးအားကိုယ်ဝန်ဆောင်သည့်အချိန်ကာလတစ်လျှောက် ကျန်းမာရေးရာဇဝင်များကို စစ်ဆေးမှု့ပြုလုပ်၍မှတ်ချတ်ပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ထိုသို့ကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်နေသောကာလအတွင်း ကျန်းမာရေးစစ်ခြင်း၊သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာစစ်ခြင်း၊မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးခြင်း (သို့) (ကျား/မ) လိင်အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ရန်အတွက်အောက်ထွာစောင်းရိုက်ခြင်း (သို့) ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေများအပါအဝင်နှင့် မွေးဖွားပြီးနောက်စစ်ဆေးပေးခြင်းစသည်တို့အား မိမိရွေးချယ်ထားသည့်ဖတ်ကေ့အတိုင်းနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၏သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းအတိုင်းစစ်ဆေးမှု့ပြုလုပ်ရန် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကာလအတွင်း ချိန်းဆိုထားသည့်ရက်ချိန်းများအတိုင်း၌ ကိုယ်ဝန်အားစောင့်ကြည့်ရန်နှင့်မှန်ကန်သောကုသပြုစုစောင့်ရှောက်စစ်ဆေးမှု့များအားရယူရန်အတွက်ဆရာဝန်နှင့်ပုံမှန်လာတွေရန်လိုအပ်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ အထူးသဖြင့် ပထမဦးဆုံးသက်ဦးကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များသည် အများအားဖြင့်မိခင်များအနေနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု့နှင့်သံသယရှိသောမေးခွန်းအများအပြားရှိနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုတို့မှ ကိုယ်ဝန်ဆောင် (ဗိုက်) အပ်ခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ မကြာခဏတွေ့ရတတ်သောမေးခွန်းများအားအဖေဖြစ်သူနှင့်မိခင်အားကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း သန္ဓေသားငယ်အားပြုစုစောင့်ရှောက်ပုံနှင့်ပက်သက်၍ ဤဆောင်းပါး၌ မှာကြားဖော်ပြထားခဲ့ပါသည်။
စံချိန်စံနှုန်းမီသောကိုယ်ဝန်ဆောင် (ဗိုက်) အပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း
ဘာကြောင့် စဥ်ဆက်မပြတ်ကိုယ်ဝန် (ဗိုက်) အပ်ခြင်းစောင့်ရှောက်မှု့အားခံယူရပါသလဲ
ကျား/မ လိင်ခွဲခြားသိနိုင်ရန်ကိုယ်ဝန်သက်တမ်းဘယ်နှစ်လတွင် အာထရာစောင်းရိုက်ရမည်လဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မိခင်နှင့်ကိုယ်ဝန် (ဗိုက်) အတွင်းရှိသန္ဓေသားငယ်၏အန္တရာယ်များကဘာတွေလဲ
အကယ်၍မိမိအိမ်ထောင်ဘက်လက်တွဲဖော်ဖြစ်သူမှ (Thalassemia) ထလာ့စမီးယားရောဂါရှိ သောကလေးရနိုင်ချေတွေ့ရှိသောအခါတွင် ဘာလုပ်ရမည်လဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် (ဗိုက်) အပ်ရာတွင် ဘာကြောင့်သွေးမကြာခဏဖောက်စစ်ရပါသလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် (ဗိုက်) အပ်ရာတွင် ဘာကြောင့် ဂလူးကို့စ် (သကြား) ရည်အားမျိုချ၍စစ်ရပါသလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် (ဗိုက်) အပ်ရာတွင် ဘာကြောင့် ခင်ပွန်း (ယောကျာ်း) ဖြစ်သူအားသွေးစစ်ရပါသလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် (ဗိုက်) အပ်ရာတွင် ဘာကြောင့် တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးရပါသလဲ
1. စံချိန်စံနှုန်းမီသောကိုယ်ဝန်ဆောင် (ဗိုက်) အပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း
စံချိန်စံနှုန်းမီသောကိုယ်ဝန်ဆောင် (ဗိုက်) အပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကိုယ်ဝန်သက်တမ်း 12 ပတ်အတွငပထမဆုံးကိုယ်ဝန်စောင့်ရှောက်မှု့နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဥ်ကာလအတွင်း ကိုယ်ဝန် (ဗိုက်) အပ်ခြင်းအနည်းဆုံး5ကြိမ်ရှိခြင်းအားဆိုလိုပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည့်ကာလအတွင်း မိခင်နှင့်အတူသန္ဓေသားငယ်အားပြည့်စုံကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု့အားကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက်နှင့် ၄င်းသည် မွေးဖွားပြီးသည့်အချိန်အထိ အဆက်မပြတ်သက်ရောက်မှု့ရှိပါသည်
2. ဘာကြောင့်စဥ်ဆက်မပြတ်ကိုယ်ဝန် (ဗိုက်) အပ်ခြင်းစောင့်ရှောက်မှု့အားခံယူရပါသလဲ
စဥ်ဆက်မပြတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင် (ဗိုက်) အပ်စောင့်ရှောက်မှု့သည် သန္ဓေသားလောင်းအား ဆက်လက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည်မှာ မိခင်နှင့်အတူသန္ဓေသားငယ်အား ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဥ်ကာလအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် မူမမှန်မှု့အန္တရာယ်များအား လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်နှင့်မိခင်နှင့်အတူသန္ဓေသားငယ်၏ သင့်တော်မှန်ကန်သောကြီးထွားမှု့နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးမှု့အား စဥ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် ဆရာဝန်မှကူညီပေးပါလိမ့်မည်ဖြစစ်ပါသည်။
3.ကျား/မ လိင်ခွဲခြားသိနိုင်ရန်ကိုယ်ဝန်သက်တမ်းဘယ်နှစ်လတွင် အာထရာစောင်းရိုက်ရမည်လဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နှင့်ကိုယ်ဝန် (ဗိုက်) အပ်သောကာလအတွင်း အဖေနှင့်အမေ သံသယရှိဆုံးသောမေးခွန်းတစ်ခုမှာ ကိုယ်ဝန်သက်တမ်းဘယ်နှစ်လတွင်အာထရာစောင်းရိုက်ခြင်းဖြင့် သန္ဓေသားငယ်အား ကျား/မ လိင်ခွဲခြားသိနိုင်ပါသလဲဟုဆိုသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ဤအကြောင်း၏အဖြေမှာ ကိုယ်ဝန် 18-24 ပတ်အတွင်း သန္ဓေသားငယ်လိင်အမျိုးအစားအား အာထာစောင်းရိုက်နိုင်ပါသည်။၄င်းသည် အာထာစောင်းရိုက်ရာတွင် လိင်သိနိုင်မှု့သည် ကိုယ်ဝန် (ဗိုက်) အတွင်းရှိသန္ဓေသားငယ်၏ကိုယ်ဟန်အနေအထားပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါသည်။
4. ကိုယ်ဝန်သက်တမ်းရင့်လာသည်နှင့်အမျှဆရာဝန်၏ ချိန်းဆိုမှု့ဘာကြောင့်မကြာခဏစိပ်လာရတာလဲ
မွေးဖွားခါနီးအချိန်ပိုင်းတွင်း အပတ်စဥ်မကြာခဏကိုယ်ဝန်စစ်ဆေးမှု့များအားဆရာဝန်မှရက်ချိန်းပေး၍စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။အဆင့်သင့်ဖြစ်စေရန်အတွက် အတတ်နိုင်ဆုံးပြင်ဆင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရိုးရိုးမွေး၍မရနိုင်သောမိခင်များအား ကလေးမွေးဖွားရန် အစီစဥ်ချပေးနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ကိုယ်ဝန် (ဗိုက်) အတွင်းရှိသန္ဓေသားငယ်၏ ကျန်းမာရေးစစ်ခြင်းနှင့် နှလုံးခုန်နှုန်းစစ်ဆေးမှု့နှင့် ရေမွှာအရည်ပမာဏအား အာထောင်းစောင်းရိုက်ခြင်းအားဖြင့် တွဲ၍ကြည့်နိုင်ပါသည်။ဤအကြားတွင် သန္ဓေသားငယ်၏နေ့စဥ်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှု့အချိန်အားစောင့်ကြည့်ရေတွက်နိုင်ပါသည်။ဤအရာအားလုံးသည် ဆရာဝန်နှင့်မိဘများမှ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအစီအစဥ်အား အဆင့်သင့်ဖြစ်စေရန် ပူးပေါင်း၍ ပြင်ဆင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
5. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မိခင်နှင့်ကိုယ်ဝန် (ဗိုက်) အတွင်းရှိသန္ဓေသားငယ်၏အန္တရာယ်များကဘာတွေလဲ
လူအတော်အများစု သံသယဖြစ်ကြသည့်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဥ်ကာလတွင်း မိခင်နှင့်သန္ဓေသားငယ်တွင် ဘယ်လိုရောဂါနှင့်အန္တရာယ်မျာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသလဲဟုဆိုသောမေးခွန်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဥ်ကာလတွင်း တွေ့ရနိုင်သောရောဂါများမှာ ဆီးချိုရောဂါ၊သွေးတိုးရောဂါနှင့် ကိုယ်ဝန်အဆိပ်သင့်နိုင်သောလက္ခဏာများဖြစ်ပါသည်။အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်သက်တမ်းရင့်လာသည်နှင့်အမျှ ထို့ကြောင့်ကိုယ်ဝန် (ဗိုက်) အပ်သည့်မိခင်အားလုံးကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဥ်ကာလအတွင်း ဆီးချိုရောဂါ ရှိ/မရှိအားစစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ စိုးရိမ်လွန်ကဲမှု့အလွန်အကျွံ့ မရှိသင့်ပါ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အများအားဖြင့် တွေ့ရတတ်သော မူမမှန်မှု့အများစုနှင့် အခြားရောဂါများသည် မွေးဖွားပြီးနောက်တွင်ပျောက်ကင်းလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။တွေ့ရနိုင်သောရောဂါသည် သွေးဥနီဆဲလ်များ၏ မျိုးရိုးဗီဇချို့ယွင်းမှု့ကြောင့်ဖြစ်သော ထလာ့စမီးယား (Thalassemia) ရောဂါပင်ဖြစ်ပါသည်။
6. အကယ်၍မိမိအိမ်ထောင်ဘက်လက်တွဲဖော်ဖြစ်သူမှ (Thalassemia) ထလာ့စမီးယားရောဂါပါရှိသောကလေးရနိုင်ချေတွေ့ရှိသောအခါတွင် ဘာလုပ်ရမည်လဲ
ယခင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ထလာ့စမီးယားရောဂါသည် မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပွားနိုင်သောရောဂါဖြစ်ပါသည်။ သို့ပေမဲ့ဆရာဝန်မှ အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှု့အား ဂရုတစ်ိုက်ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှု့မရှိပါနှင့်။ကိုယ်ဝန် (ဗိုက်) အတွင်းရှိသန္ဓေသားငယ်အားထိခိုက်စေနိုင်သောပြင်းထန်မှု့များအား အသင့်လျော်ဆုံးသောကုသစောင့်ရှောက်မှု့အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များအားဆက်လက်ပေးဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့သို့လျှင် ဖြစ်နိုင်ပါက ပုံမှန်မဖြစ်နိုင်ချေများအတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်စီမံထားခြင်းများနှင့်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့မျာအား ကြိုတင်၍လုပ်ဆောင်ထားသင့်ပါသည်။
7. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် (ဗိုက်) အပ်ရာတွင် ဘာကြောင့်သွေးမကြာခဏဖောက်စစ်ရပါသလဲ
မိခင်အသစ်များအပါအဝင် ကိုယ်ဝန်ရှိဖူးခြင်း (သို့) ကိုယ်ဝန် (ဗိုက်) အပ်ဖူးသူတိုင်းသည် ဘာကြောင့်အကြိမ်များစွာသွေးဖောက်စစ်မှု့များလိုအပ်ပါလဲနှင့်ပက်သက်၍သံသယရှိနိုင်ကြပါသည်။သတ်မှတ်ပြုလုပ်ရမည့်ရည်ရွယ်ချက်တွင် အကြာခဏသွေးဖောက်စစ်ရန်အချက်ပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
မိခင်တွင်ငုပ်လျှိုးနေသော (Thalassemia) ထလာ့စမီးယားရောဂါမူမမှန်အားတွေ့ရှိပါက ဖခင်ပါပို၍စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
အကယ်၍မိခင်၌ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်နိုင်သောရောဂါများဖြစ်သည့် HIV နှင့် (Syphilis) အပါအဝင် အသည်းရောင်အသားဝါ (Hepatitis B) ဘီပိုးကူးစက်မှု့ရှိပါကရှိ ကိုယ်ဝန်(ဗိုက်)အတွင်းရှိကလေးငယ်လုံခြုံမှု့အားကာကွယ်ရန်အတွက် ပို၍ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှု့အားခံယူသင့်ပါသည်။
သွေးဖောက်စစ်မှု့သည် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် မူမမှန်မှု့အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးများအား ကိုယ်ဝန်ဆောင်အစဦးပိုင်းအဆင့်၌ စောလျင်စွာသိရှိခဲ့လျှင် ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်ကုသရာတွင်နှင့် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောအခြားအခြေအနေများမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်ထောက်ပံ့မှု့အားရစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
8. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် (ဗိုက်) အပ်ရာတွင် ဘာကြောင့် ဂလူးကို့စ်(သကြား)ရည်အားမျိုချ၍စစ်ရပါသလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ၂၄-၂၈ ပတ်ကာလအတွင်းဆီးချိုဖြစ်နိုင်ချေအား မိမိခန္ဓာကိုယ်မှ သကြားဓာတ်အား ခုခံကိုင်တွယ်နိုင်မှု့ ရှိ/မရှိကို ဂလူးကို့စ် (သကြား) ရည်အားမျိုခြင်းဖြင့်စစ်ဆေးရပါသည်။စစ်ဆေးပုံ ၂ မျိုးရှိပါသည်။၄င်းတို့မှာ-
စိစစ် စစ်ဆေးမှု့အမျိုးအစားတွင် ရေ-အစားအစာရှောင်လာရန်မလိုပဲ ဂလူးကို့စ် (သကြား) ရည် 50 ဂရမ်အားမျိုချ၍ 1 နာရီစောင့်စားရပြီးလျှင် သွေး 1 ကြိမ်ဖောက်စစ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
စမ်းသပ်ရှာဖွေစစ်ဆေးမှု့အမျိုးအစားတွင် ရေ-အစားအစာရှောင်လာရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဂလူးကို့စ်(သကြား)ရည်မမျိုချမီ သွေးဖောက်စစ်ဆေးခြင်းအမျိုအစား2မျိုးရှိပါသည်။
2.1 ဂလူးကို့စ် (သကြား) ရည် 100 ဂရမ်မျိုချပြီးနောက် 1 နာရီကြာ2နာရီကြာ3နာရီကြာ နောက်ပိုင်းတွင်သွေးဖောက်စစ်ပုံနှင့်
2.2 ဂလူးကို့စ် (သကြား) ရည် 75 ဂရမ် ဂရမ်မျိုချပြီးနောက် 1 နာရီကြာ2နာရီကြာ နောက်ပိုင်းတွင်သွေးဖောက်စစ်ပုံ
9. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် (ဗိုက်) အပ်ရာတွင် ဘာကြောင့် ခင်ပွန်း (ယောကျာ်း) ဖြစ်သူအားသွေးစစ်ရပါသလဲ
ကျန်းမာရေးစစ်ခြင်း (သို့) ဖခင်ဖြစ်သူအားသွေးစစ်ခြင်းသည် လိုအပ်သောအချက်တစ်ခုအပါအဝင်လည်းဖြစ်ပြန်ပါသေးသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖခင်၌လည်း မိဖင်အားကူးစက်နိုင်သောရောဂါအန္တရာယ်များ ရှိ/မရှိခြင်းအား ဥပမာ ဆစ်ဖိလစ်ပိုး၊အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ ပိုး၊အေအိုင်ဒီအက်စ် (သို့) အဖေနှင့်အမေတွင် မိမိသန္ဓေသားငယ်အား မျိုးရိုးလိုက်ရောဂါများဖြစ်သည့် ထလာ့စမီးယားရောဂါကဲ့သို့သောကူးစက်မှု့များအား ကိုယ်ဝန်စရှိသည့်အချိန်မှစ၍မွေးဖွားပြီးသည်အထိမှန်ကန်သောကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်ရရှိရန်အတွက် သွေးဖောက်စစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။အချို့သောအခြေအနေများတွင် မွေးဖွားပြီးနောက်ထပ်မံ၍စစ်ဆေးမှု့များလည်းလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
10. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် (ဗိုက်) အပ်ရာတွင် ဘာကြောင့် တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးရပါသလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဥ်(ဗိုက်)အပ်ရာတွင် ဆရာဝန်သည်မိခင်အား တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ရက်ချိန်းပေး၍ထိုးပေးလေ့ရှိပါသည်။တုတ်ကွေးရောဂါသည် သာမန်လူများထက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များတွင် ပိုပြင်းထန်နိုင်သောရောဂါတစ်ခုဖြစ်ခြင်းနှင့် အမျိုးမျိုးသောနောက်ဆက်တွဲရှုပ်ထွေးမှု့ရောဂါများအားဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ပြင်းထန်မှု့အများဆုံးမှာ ဥပမာ အဆုပ်ရောင်ရောဂါ၊နှလုံးသွေးကြောကျဥ်းခြင်း၊နှလုံးအမောဖောက်ခြင်းကဲ့သို့သော ပိုမိုပြင်းထန်မှု့အခြေအနေများသည်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် မိခင်နှင့်ရင်သွေးငယ်၏ တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေအား လျော့ချနိုင်ရန်အတွက် ကိုယ်ဝန်သက်တမ်း4လကျော်တွင် ကာကွယ်ဆေးအားထိုးပေး၍ 1 နှစ်လျှင် 1 ကြိမ် ပုံမှန်ထိုးထားသင့်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် (ဗိုက်) အပ်ခြင်းသည် အရေးကြီးသောကဏ္ဍတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိမိကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဝန်ရှိသည်ဟုစသိချိန်မှစ၍မွေးဖွားပြီးသည့်အထိ မိခင်နှင့်ရင်သွေးငယ်အားထိခိုက်နိုင်သောရောဂါအမျိုးမျိုးများအတွက် သင်၏ဆရာဝန်မှ သင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးခြင်း၊တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းများအပြင် ရောဂါအမျိုးမျိုးအားစစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်စောင့်ရှောက်မှု့နှင့်ပက်သက်၍သံသယရှိသူများ (သို့) အကြံဥာဏ်တောင်းလိုသူများအတွက် ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ ဆက်သွယ်နိုင်သောလမ်းကြောင်းများ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ခြင်း (သို့) သင်နှင့်နီးသောဆေးခန်းဟု Google တွင်ရိုက်ရှာခြင်းဖြင့် Intouch Medicare ဆေးခန်းဌာနခွဲတိုင်းအားရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင့်နှင့်သင့်ရင်သွေးငယ်၏ပြည်စုံသောကျန်းမာသန်စွမ်းရေးအတွက်နှင့်မွေးဖွားကြီးနောက်စစ်ဆးမှု့များကိုပါကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်ပေးရန် အထူးကုဆရာဝန်များရှိပါသည်။